Kuwedzera kwezhizha kwePlet muna 2020
SPS brand uye Japan Bando Brand Vakatora chikamu mu2019 Shenzhen Touchscreen Exhibition
Kubva munaNovember 21 kusvika munaNovember 23rd, 2019, iyo ine simba uye yakakura Shenzhen Yakazara Kubata uye Kuratidzira Exhibition muChina yekubata skrini indasitiri yakatangwa zvakanyanya kuShenzhen Convention uye Exhibition Center. Sezvo mamiriro ekunze emombe yekubata anoratidza indasitiri, ino sho ...
SPS kukwesha rabha uye Bando kukwesha rabha zvakabudirira kutora chikamu mu 2019 Asia-Pacific Network Kudhinda Exhibition
ne admin pane 19-11-04
Rodent-senge madonhwe, mucheche fomula yapfuura kutengesa zuva: Lancaster County yekudyara kuongororwa: June 7, 2019 | Kuongorora Kwekudyira
IPennsylvania, Dhipatimendi rezvekurima, inoshandisa njodzi-yakavakirwa yekuongorora maitiro ekuresitora emaresitorendi nevamwe vanobata chikafu. Duke paRusununguko, 1002 N. Duke St., Chivabvu 13. Chiedza hachidzivirirwe kana kupwanya-humbowo mukufamba-muchitonhorera. Dema, nyoro masara pane echando muchina deflector ndiro; cl ...
Global Scrubber-Dryers Musika (2018-2023) nerudzi rweChigadzirwa, Zvishandiso, Revenue, Mikana, Vatambi, Matunhu
Worldwide Scrubber-Dryers Musika iri ichangobva kuburitswa mushumo wekutsvagira unofukidza zvese zveGlobal Scrubber-Dryers 2018 pamwe nekunyatsoongorora kweScrubber-Dryers musika wekukura kwezvinhu, musika weScrubber-Dryers musika, saizi, kudiwa uye mushambadzi weScrubber-Dryers kugovera. Iyo ...
Kutaura nezvechidzitiro kudhindwa kwegirazi
ne admin pane 19-06-12
Girazi rekudhinda rinoreva nzira yekudhinda yechiratidzi uchishandisa ndiro yegirazi kana mudziyo wegirazi sechigadzirwa chikuru. Iko kushandiswa kwegirazi kune nhoroondo refu muChina, uye kunyangwe munguva yanhasi, girazi richiri kuita basa rakakosha muhupenyu hwedu. Parizvino, dambudziko remari rinotangira o ...
Chinovhara zvokudhinda chinovhara rechengetedzo mazano
ne admin pane 18-03-23
Pasinei mhando chidzitiro yokudhinda, pajira riya inofanira kucheneswa uye degreased pamberi kushandiswa. Kana runoenzanirana basa degreasing haina kuitwa, chidzitiro zvichaparadzwa delaminated kana kuparadzwa mukati nokudhinda. Kana mambure jira hauna kucheneswa nenguva, zvichakurudzira garbled uye chinovhara kudhinda vachatitaka ...
SPS-FGB Fiber Girazi Bhodhi Squeegee
Kunyange zvazvo zvinonyatsorehwa paanochinja kwoupfumi 2015, asi chidzitiro pakudhinda indasitiri ichiri kubudirira nemigumisiro yakanaka, mugore rino, vakawanda nechidzitiro kudhinda makambani kubudikidza chigadzirwa Optimization, zvekuvaka kusangana nezvimwe kusanduka, vachitarisira kusvika nokukurumidza kubvuta indasitiri wacho Kurayira heig ...
Chinovhara wokudhinda mabasa
Chinovhara aidhinda kushanda musimboti sumo - 1. Plane sandara chinovhara wokudhinda mabasa. 1 Plane sikirini wokudhinda vanoshanda kutenderera chirongwa. Kana munhu sandara rasterointi chidzitiro mhando monochromatic Semi-otomatiki chinovhara wokudhinda, mumwe zvayo basa zvinogara zviri: dzichifura → Positioning → kuwa ...
Printing zvakarukwa nhanganyaya ayo shanda
Dots mune zvokudhinda kuridza basa rinokosha. Dots anogona uchatamisa gradations, zvese, uye mavara ari mufananidzo. Chero zvichiratidza kana transmissions dzine ruvara inoramba kana nezvimedu sirivha yokuumba kuramba vachiita inzwi. Izvi vachiita inzwi uye rukoko zvinofanira mifananidzo kana zvimwe meth ...
How kuvandudza chinovhara wokudhinda kugadzirwa kunyatsoshanda uye kudhindwa unhu
Nokuti makasitoma avo kunotenga chidzitiro vaidhinda, zvavari kunetseka ndewekuti yakatengwa michina inogona purofiti. Zvichienzaniswa zvetsika Chinyorwa kushandiswa, Semi-otomatiki kana zvakazara-otomatiki chidzitiro vaidhinda vane zvinotevera zvazvakanakira: 1. Chokutanga, kuderedza basa mari. Chechipiri, Almeida ...
2017 Shenzhen Kubata Screen Exhibition
The 2017 Shenzhen Touch Chinovhara Exhibition wakaitwa November 24 panguva Shenzhen Convention uye Exhibition Center. PLET akaratidza kuti FGB Washington City Offices bhodhi squeegee, AS kabhoni internet pepuranga squeegee, uye zvaitika squeegee mukuyi. SPS sikirini zvokudhinda squeegee iri Classified muzvikamu zvitatu: ...
Vietnam Chinovhara Printing Exhibition 2017
On May 12, 2017, wechipiri nechidzitiro pakudhinda inoratidzirwa yakaitirwa Saigon Exhibition Center Ho Chi Minh City, Vietnam. SPS muchiso squeegee akatora mugove pashoo uye yakatanga iri AS yaitsigira divi kabhoni internet squeegee. Zvakanakira AS kabhoni internet squeegee: 1, yaitsigira divi rutsigiro ndiye M ...
2016 Semiconductor uye Microelectronics Exhibition
Plet rinogadza SPS Squeegee Sales uye Technical Staff kuti Tishanyire Semiconductor uye Microelectronics Exhibition yakaitirwa Big Sight muTokyo musi January 18, 2016 kunzwisisa ruzivo pamusoro chidzitiro kudhinda uye kuchinjana wakanaka chinovhara kudhinda pezvakaitwa, panguva kukurukurirana, nechidzitiro yokudhinda Pr ...
SPS Squeegee vaiitawo 2015 CSGIA Exhibition
On October rechi21, 2015, panguva Shanghai New International Expo Center, SPS yakatanga ari FGB internet girazi bhodhi squeegee uye M-mhando solvent nemishonga kusakara nemishonga itsvedzerere, iyo zvikuru zvakazivikanwa nevanhu vatengi. SPS muchiso squeegee chakagadzirwa Japanese polyurethane squeegee uye muzvikamu ...